अब जग्गा ९ थरी, लागु हुने भए यस्ता नियम, अब के होला ? – जलजला अनलाइन
Posted on February 9, 2019 Author Comments Off on अब जग्गा ९ थरी, लागु हुने भए यस्ता नियम, अब के होला ?
माघ २६, काठमाडौं । अब जग्गाको वर्गीकरण नयाँ तरिकाले हुने भएको छ । प्रस्तावित भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जमिनलाई नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यो खबर सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रका रूपमा जमिन विभाजन गरिएको छ ।
यसबाहेक सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रका रुपमा पनि जमिनको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । यसअघि जमिन अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार प्रकारको हुने प्रचलन थियो ।
कुनै स्थान वा बस्ती विपद वा प्राकृतिक प्रकोपको कारण असुरक्षित भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित वा अव्यवस्थित स्थान घोषणा गरेर मात्रै भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रलाई विभिन्न उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने छ । विधेयकमा संघीय भूउपयोग परिषद् गठनको व्यवस्था पनि छ ।
प्रदेश वा स्थानीय तहले यीबाहेक अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न आवश्यक ठाने संघीय भूउपयोग परिषद्मा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नु÷गराउने पर्ने छ । ऐन प्रारम्भ हुँदा मन्त्रालयबाट तयार भएका स्थानीय तहका भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने छ । भूउपयोग आयोजनाले ३६ जिल्लाका करिब ४ सय स्थानीय तहका नक्सा बनाइसकेको छ । करोडौंको लगानीमा बनाएका नक्सा हाल नापी विभागमा थन्किका छन् ।
प्रस्तावित ऐनले जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र कित्ताकाटलाई नियमन गर्नेछ । नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न नसकिने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । आवासीय क्षेत्र बाहेकमा व्यवसायिक रुपमा घडेरी बनाएर बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन ।
भूउपयोगसम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र बनाइने छ । प्रस्तावित ऐनमा तीन तहमा भूउपयोग परिषद् बनाउने व्यवस्था छ । कम्तीमा एक जना भूउपयोगसम्बन्धी विशेषज्ञसहित सरकारले तीन जना मनोनयन गर्ने गरी भूव्यवस्था मन्त्री÷राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय संघीय भूउपयोग परिषद् बनाइने छ ।
त्यस्तै प्रदेश भूउपयोग परिषद्, स्थानीय भूउपयोग परिषद् पनि ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय परिषद् सात सदस्यीय हुने छ । संघीय र प्रदेशका मनोनित सदस्यको पदावधि ३ वर्ष र स्थानीय तहको ५ वर्ष हुनेछ ।
जग्गा प्रशासनसम्बन्धी केही विज्ञले भने भूउपयोग परिषद्लाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन हुँदै, यसरी थाहा पाउन सकिन्छ नतिजा
साउन १७, काठमाडौ । बिहिबार (आज) कक्षा १२ काे सबै संकायकाे नतिजा प्रकाशन हुँदैछ । बिगतमा विभिन्न संकायकाे नतिजा फरक-फरक समयमा प्रकाशन गर्दै अाएकाे थियाे । यसपटक देखि कक्षा १२ काे नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीमा अाउने भएकाे छ । नतिजा प्रकाशन गर्नकाे लागि राष्ट्रिय परीक्षा वाेर्डकाे बैठक बसिरहकाले केही समयमा नतिजा प्रकाशन हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी […]
दङ्गालीले एक्कासी तुलसीपुर–घोराही सडकखण्ड किन बन्द गरे ? (भिडियोसहित)
Posted on February 18, 2018 Author जलजला अनलाइन
प्रकाश डाँगी/फागुन ६, दाङ । धुलो नियन्त्रणको माग गर्दै आइतवार तुलसीपुर–घोराही सडखण्ड स्थानीयले एक घन्टा बन्द गराएका छन् । तुलसीपुरको बरुवागाउँले कुलोदेखि हात्तिखौवा चोसम्म अचाक्ली धुलो उडेपछि त्यो नियन्त्रणको माग गर्दै स्थानीयले एक घन्टा चक्का जाम गरेका हुन । उक्त सडक खण्डको स्तरउन्नतीको नाममा लामो सयमदेखि भत्काइएको सडक कालोपत्रे नगर्दा त्यसक्षेत्र आज धुलाम्मे हुँदा सर्वसाधारणको […]
काठमाडौँबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ३५ कार्यकर्ता पक्राउ
वैशाख २८, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणका क्रममा विरोध गर्न सक्ने शंकामा प्रहरीले काठमाडौंबाट नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ३५ भन्दा बढी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले बताए । प्रधानमन्त्री मोदीको सवारी स्थल, बासस्थान र […]
एक महिला यौनकर्मीको खतरनाक आत्मकथा: ‘मेरा ग्राहक सांसद, पुलिस र आर्मी’ (नालीबेलीसहित)